ဗူးသီးကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Monday, February 17, 2014 Taunzalat
ကျွန်တော်တို.ဇာတိ (မိုးကုတ် ) မှာဗူးသီးကြော်ရင်..ဂျူးမြစ်လေးထည့်ကြော်
ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန်. ......၁ ထုပ်
ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန်.ကို ဇလုံခပ်ကြီးကြီးထဲမှာဖောက်ထည့်ပြီး၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်.၊ ထောင်းထားသောချင်း၊ ပာင်းခတ်မှုန်. ၊ ရေတိုနဲ.
ပာင်းခတ်မှုန်.၊ ကြက်သွန်နီ၊ ပူဒီနံ၊ငရုတ်စိမ်းအကြမ်းမှုန်.တို.နှင့်စပ်ထား
မှတ်ချက် ။။ ဆန်မှုန်.ကိုယ်တိုင်စပ်မယ်ဆိုရင်တော့..ဆန်မှုန်.(၂) ဆ ပဲစိမ်း
မှုန်.(၁) ဆ ရောစပ်နိူင်ပါတယ်..။
ဆန်မှုန့် ၂ ဆ၊ ကောက်ညှင်းမှုန့် ၁ဆ၊
ဆားနည်းနည်း ဆော်ဒါနည်းနည်းကို ပြစ်ပြစ်ဖျော်ပါ။
ဗူးသီးတွေ အကုန်လုံးကို မုန့်နှစ်နဲ့ မနည်ပါဘူး။
တစ်ခုဆီ မုန့်နှစ်ထဲကို နှစ်နှစ်ပြီး ကြော်ရပါတယ်။
ဆီများများနဲ့ ကြော်ရင် မုန့်ပိုရွပါတယ်တဲ့.